Tababare Maurizio Sarri oo tilmaamay hal dhibaato uu leeyahay Eden Hazard ka hor final-ka Europa League. – Gool FM
Tababare Maurizio Sarri oo tilmaamay hal dhibaato uu leeyahay Eden Hazard ka hor final-ka Europa League.
Abdirashid Mohamud May 29, 2019
(London) 29 Maajo 2019. Tababaraha Chelsea Maurizio Sarri ayaa amaan dusha uga tuuray xiddigiisa reer Belgium ka hor kulanka ay caawa magaalada Baku kula ciyaarayaan Arsenal, balse wuxuu carabka ku dhuftay inuusan wax xiiso ah u qabin tababarka maadaama ay wax walba u sahlan yahiin.
Macalinkaan reer talyaani wuxuu ka dhawaajiyay iney jiraan waxyaabo tusinaya in xiddigii hore Lille uusan xiiso ba’an u qabin tababarka maadaama aysan jirin wax dhib ku ah sababtoo ah tayadiisa.
“Hazard waa mid lagu farxo inta ciyaarta socoto, balse mararka qaar inta lagu jiro isbuuca waa dhibaato maadaama uu yahay shaqsi aad xirfad u leh, sidoo kalana ku caajisa tababarka sababtoo ah wax walba wey u sahlan yahiin” ayuu yiri Maurizio Sarri.
“Hadda, Eden waa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican yurub iyo adduunka”
“Waxey ila tahay inuu hormari doono, isla markaana uu isku dayo inuu noqdo kan ugu fiican qaaradda yurub”
Xiddiga reer Belgium waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay lala xiriirinayay Real Madrid, filashadu waxey tahay inuu laga shaqeyn doono sidii uu Madrid u aadi lahaa wixii ka dambeeya final-ka caawa ka dhici doona magaalada Baku.
Ugu dambeyntiina Sarri wuxuu diiday inuu ka hadlo mustaqbalka xiddigaan, wuxuuna doorbiday inuu kaliya diirada saaro ka hadlidda kulanka final-ka caawa.
HORDHAC: Arsenal vs Chelsea - Dhaawacyada, safarka macquulka ah & Wax walba oo ku saabsan final-ka UEFA Europa League.
Miyey Barcelona lacago badan u quuri doontaa da'yarka reer Holland - Matthijs de Ligt? Yaase go'aan ka gaari doona arrinkaan?